हेर्नुस् त यी जोडीले सार्वजनिक पार्कमा आफूहरूलाई रोक्न नसकेपछि… – PathivaraOnline
Home > रोचक > हेर्नुस् त यी जोडीले सार्वजनिक पार्कमा आफूहरूलाई रोक्न नसकेपछि…
admin November 6, 2020 November 10, 2020 रोचक, समाज	0
एक युगल जोडिले सार्वजनिक स्थलमा आफूलाई रोक्न नसकेपछि समस्यामा परेका छन् । यो समाचार अमेरिकाको हो । त्यहाँ एक युगल जोडीले विस्कोन्सिन स्टेट फेयरमा आगन्तुकहरूको अगाडि नै ढुक्कसँग सह-वास गरेको खबरले अमेरिकी सञ्चारमाध्यम तात्तिएको थियो । वेस्ट एल्लिसस्थित उक्त रमाइलो मेलामा नाम नखुलाइएका ती महिला र पुरुषले निर्धक्क सार्वजनिक स्थलमा सह-वास गरिरहेको भिडियो बनाएका बुझिएकाे छ ।
यसरी बनाएकाे भिडियो कसरी भयो थाहै भएन तर एकाएक आफ्नो यस्तो भिडियो सहितकाे समाचार अनलाइनमा भाइरल भएको न्युज स्टेसन डब्ल्यूआईटीआईले जनाएको छ । सो मेलामा खटिएका अधिकारीहरूले तिनीहरूको भिडियो फुटेज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाइरल भइरहेको पुष्टि गरेका छन् ।
तर उक्त मेला आयोजक पक्षका प्रवक्ता क्रिस्टी चकलले अनुसन्धान शुरू भएपछि सो भिडियो हटाउन लगाएका जानकारी गराएकी छिन् । ती जोडीले आफूहरूको भिडियो खिचिँदै गरेको थाहा भएको पाइएको छ । यसरी खुलमखुला यस्तो कार्य भइरहेको देखेपछि मेला हेर्न पुगेका मानिसहरूको ला’जले रातो हुँदै यता उता लागेका थिए ।
गोप्य अंगको परिक्षण गर्नुपर्छ भनेर सुइ लगाएपछि….
सलाम छ यस्ता वडाध्यक्षलाई! जस्को रगतले बचिन् यी महिला!!